नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?
२०७६ चैत, २०
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी नेपालसम्म आइपुग्दा यो रोगको संक्रमणलाई न्यून गर्न अहिले पूरै देश ‘लकडाउन’ गरिएको छ । विश्वका कयौं मुलुक अहिले बन्द छन् । यो महामारी रोक्न यसको विकल्प देखिएको छैन । मानिसको जीवन बचाउन यो अनिवार्य छ । तर, यसले विश्व अर्थतन्त्रको गति र दिशा पूरै बदल्ने आकलन गरिएको छ । यस्तोमा नेपाल पनि यसबाट अछुत नरहला । यो महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने चिन्ता र चासो धेरैको छ । कतिपयले खासै असर नपर्ने आकलन गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यस्तै सोचिरहेको देखिन्छ । विगतमा विश्वमा देखिएको मन्दीले नेपालमा असर नगरेकाले अहिले पनि त्यस्तै हुने अनुमान गरिएको छ जुन सरासर गलत छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, विप्रेषणमार्पmत । यसमा अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै दबाब पर्ने निश्चित छ । विदेशी मुद्रा आउने प्रमुख माध्यम विप्रेषण र पर्यटन प्रभावित भएपछि आयात गर्ने क्षमता घटिहाल्छ । बचत र लगानीमा भन्दा उपभोगमा रमाउने पुस्ता छ । यसका लागि आयात रोक्न पक्कै पनि निकै कठिन हुन्छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र धराशयी त हुँदैन तर अत्यन्त कठिन हुनेचाहिँ स्पष्ट छ । सरकारी जागीर र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई यसले त्यति असर नगर्ला तर अन्य क्षेत्रलाई भने व्यापक असर पार्नेछ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको उपभोग विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा आधारित छ । विश्वबजारमा रोजगारीको अवसरमा कमी आउँदा विश्वभर रहेका नेपाली यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहन सक्छन् । उनीहरू नेपाल फर्किए भने त्यसले उपभोगको स्तर घटाउने र बेरोजगारीको अवस्था सृजना गर्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, देशभित्रै उपार्जनका लागि गरिने प्रयासले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । विलासिताको सामानको उपभोगमा कमी आउँदा यसले वर्षौंदेखिको व्यापारघाटा कम गर्दै रेमिट्यान्समा अडेको हाम्रो बाह्य सन्तुलनलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने अवसरसमेत सृजना गर्न सक्छ । यस्तो आशावादी सोच भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा पनि नसोचिएको होइन, तर स्थिति उल्टो देखियो । त्यति बेला असर परेर अहिले पनि पर्दैन भन्नुचाहिँ ठूलो गल्ती हुनेछ ।
२००८ को मन्दीमा नेपालको अर्थतन्त्र विश्वसँग त्यति जोडिएको थिएन । भूकम्पका बेला नेपालमा मात्रै समस्या आएको थियो । तर, अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र महामन्दीमा जाने निश्चित प्रायः छ । अर्थशास्त्रीहरूले यसको भविष्यवाणी गरिसकेका छन् । त्यसो हुँदा यो संकट नेपालका लागि असहज हुने देखिन्छ । यद्यपि अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भने हुनेछैन ।
नयाँ बजार, काठमाडौं ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा चुक्दै सरकार[२०७७ जेठ, ९]
विद्युतीय कारोबारका लागि अवसर[२०७७ जेठ, ९]
गृहको गलत निर्णय[२०७७ जेठ, ९]
नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्र बोक्ने हो भने कर बढ्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा[२०७७ बैशाख, २६]
अर्थमन्त्रीज्यू, खर्च घटाउने कि करको धम्की दिने ?[२०७७ बैशाख, २६]
जर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरण : अमेरिकाभर विरोध प्रदर्शन र झडप
हङकङसँग विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्दै अमेरिका
लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने निर्णय
संक्रमित निको भएपछि कोरोनामुक्त भयो भक्तपुर जिल्ला
क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि